Ukonakaliswa egameni likaHarry Potter | Uncwadi lwangoku
UAlex Martinez | | Izaziso, Ezahlukeneyo
Ifoto ye-domen ehlaselwe.
Uthanda ungathandi, kwi saga ye Iincwadi zikaHarry Potter ezibhalwe nguJK Rowling zininzi zokumbulela ngazo. Anditsho oku ngenxa yokuthetha, kodwa ndiyaxolisa ngokwenene nangona ndingazange ndibathande okanye ndizive ndinomdla kweli bali.
Kukho nawuphi na, kufuneka kuqatshelwe ukuba kunjalo abantwana abaninzi abaye baqala uhambo lwabo lokuqala uncwadi ngesandla kunye adventures yokufunda komlingo. Inyani yokuba, ke ngoko, kuthi sonke esizithatha njengabantu abaqhubela phambili umkhwa wokufunda kufuneka sibe nombulelo kwaye siyivume.
Indalo iphela eyasungulwa nguJK Rowling iye yaba luhlobo lwehlelo kubathandi besaga. Amaziko olondolozo lwembali, ukuphindwaphindwa okanye amaqela abafundi aye anda kwihlabathi liphela, esenza ubunzima beenoveli ngakumbi nangakumbi kwinkcubeko edumileyo. Injalo ke le mpembelelo yokuba "Quidditch" (umdlalo onemitshayelo ephaphazelayo evela kwiinoveli) ukuze ukwazi ukudlalwa ngokwenyani ngale ndlela, iitumente zabalinganiswa
Intshukumo epheleleyo enxulumene noHarry Potter Ngamanye amaxesha ichaphazeleka ngabantu abangaziyo ukuba balithathe njani eli thando kakuhle. Ndiyithetha le nto ngokunxulumene neendaba ezithe zapapashwa kumajelo osasazo ahlukeneyo ekuxelwa kuwo ukuba I-dolmen yangaphambi kwembali eneminyaka engaphezulu kwama-4.000 ubudala ivele ngomzobo wegrafiti ohambelana nophawu oluvela encwadini "UHarry Potter kunye neeHallows ezibulalayo".
Iinyani zenzekile eVigo, ngakumbi kwidolmen yedolophu ebekwe eCasa dos Mouros. Isimboli ekuthethwa ngayo iyahambelana naleyo imele ii "Deathly Hallows" ngokwazo. Singathetha, ke, ngesangqa ngaphakathi konxantathu bobabini bawele ngomgca ukusuka phezulu kuye ezantsi.
Abasemagunyeni bavule uphando ukuze bacacise inyani kwaye bafune kulowo unoxanduva lokudyobha igama loncwadi ngesenzo esidelekileyo. Ukusilela kwentlonipho kwinkcubeko ekhohlakeleyo etyhila ubuntununtunu obuncinci benxalenye yoluntu lwethu.
Ubundlongondlongo Ayiphelelanga nje ekungcoliseni ilitye lesikhumbuzo lexabiso elilodwa lembali, ikwahlambele nomfanekiso wabafundi bokwenene kunye nabalandeli besaga. Intlungu yokuba iindaba zolu hlobo zihambelana ngqo nokufunda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukonakaliswa egameni likaHarry Potter
Iintlobo zoncwadi ezi-6 ezingaziwayo